စက်တင်ဘာ 2019 – BSI :: Bureau of Special Investigation
Home > 2019 > စက်တင်ဘာ
ထိုင်းအစိုးရသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည့် ပြည်နယ်များအပါအဝင် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ပြည်နယ် (၂၄) ခုတို့၌ အာဖရိကဝက်အပြင်းဖျားရောဂါသတိပေးချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့
ထိုင်းအစိုးရသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည့် ပြည်နယ်များအပါအဝင် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ပြည်နယ် (၂၄) ခုတို့၌ အာဖရိကဝက်အပြင်းဖျားရောဂါ သတိပေးချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့
ထိုင်းနိုင်ငံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ပြည်နယ် (၇၇) ခုအနက် ပြည်နယ် (၂၄) ခုတို့၌ အာဖရိကဝက်အပြင်းဖျားရောဂါ ( African Swine Fever- ASF ) နှင့်ပတ်သက်သည့် အထူးသတိပေးချက်များကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၇) ရက် (သောကြာ) နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည့်ပြည်နယ် (၇) ခုပါဝင်ကြောင်း၊ အဆိုပါပြည်နယ်များမှာ ချင်းရိုင်၊ ချင်းမိုင်၊ မယ်ဟောင်ဆောင်၊ ရာချာဘူရီ၊ ရနောင်း၊ ပတ်ချာဘူရီနှင့်တာခ့်ပြည်နယ်များ ဖြစ်ကြောင်း၊ တာခ့်ပြည်နယ်တွင် ခရိုင် (၅) ခုဖြစ်သည့် မဲဆောက်၊ တာဆောင်ရန်း၊ အုန်းဖန်၊မဲရက်စ်မက်နှင့် ဖော့ဖရာခရိုင်တို့၌လည်းကောင်း၊ ပတ်ချာဘူရီပြည်နယ်တွင် နောင်ရာပလောင်နှင့်ကန်ခရာချန် ခရိုင်များ၌လည်းကောင်း၊အာဖရိကဝက်အပြင်းဖျားရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ အထူးစောင့်ကြည့်မှုများပြုလုပ်ရန် ညွှန်ကြားထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံမွေးမြူရေးဌာန၏ ကြေညာချက်၌ အဆိုပါ ပြည်နယ်များအတွင်းသို့ ဝက်နှင့် ဝက်သားထွက် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများကို သယ်ဆောင်သူများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဒေသခံ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးဌာန တာဝန်ရှိသူများထံမှ ခွင့်ပြုမိန့်ကို မဖြစ်မနေရယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာခြင်းမရှိဘဲ ဝက်နှင့်ဝက်သားထွက်ကုန်ပစ္စည်းများကို ခွင့်ပြုချက်မဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ပါက ကျူးလွန်သူအား ၂၀၁၅ ခုနှစ် တိရစ္ဆာန်ရောဂါဆိုင်ရာ ဥပဒေပြဌာန်းချက်နှင့်အညီ အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ် (၂) နှစ်အထိဖြစ်စေ၊ ဒဏ်ငွေ ဘတ် (၄) သောင်းဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မည်ဟု ဖော်ပြထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းပြည်နယ် ထိုင်း – မြန်မာနယ်စပ် ချင်းရိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဝက် (၂) ကောင်မှာ အကြောင်းရင်းမသိရှိရဘဲ သေဆုံးသွားခဲ့ပြီးနောက် ထိုင်းအစိုးရသည် အာဖရိကဝက်အပြင်းဖျား ရောဂါကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်သည့်အနေဖြင့် ဝက်အကောင်ရေ (၂၀၀) ခန့်ကို ရှင်းလင်းသုတ်သင်ခဲ့သည်ဟု www. thethaiger.com အင်တာနက် website တွင်ဖော်ပြပါရှိပါသည်။
အမေရိကန်အစိုးရသည် အမေရိကန်စတော့အိတ်ချိန်းများရှိ တရုတ်ကုမ္ပဏီများအား ဖယ်ရှားရန် စီစဉ်နေသည့်သတင်းကြောင့် နာမည်ကျော်အလီဘာဘာ ကုမ္ပဏီအပါအဝင် တရုတ်စတော့ရှယ်ယာတန်ဖိုးများနှင့် တရုတ်ယွမ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းခဲ့
အမေရိကန်အစိုးရသည် အမေရိကန်စတော့အိတ်ချိန်းများရှိ တရုတ်ကုမ္ပဏီများအားဖယ်ရှားရန် စီစဉ်နေသည့်သတင်းကြောင့် နာမည်ကျော်အလီဘာဘာကုမ္ပဏီအပါအဝင် တရုတ်စတော့ ရှယ်ယာတန်ဖိုးများနှင့် တရုတ်ယွမ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းခဲ့
အမေရိကန်အစိုးရသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ စတော့အိတ်ချိန်းများစာရင်းတွင်ပါဝင်နေသည့် တရုတ်ကုမ္ပဏီများအား ဖယ်ရှားရန်စီစဉ်နေပြီး တရုတ်နိုင်ငံအတွင်း၌ အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သွားရောက်ပြုလုပ်မည့်ကိစ္စများ အပေါ်၌လည်း ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်မှုများပြုလုပ်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိသည်ဟူသော သတင်းများထွက်ပေါ်လျက်ရှိသည့်အတွက် နာမည်ကျော်တရုတ်ကုမ္ပဏီ အလီဘာဘာအပါအဝင် တရုတ်စတော့ရှယ်ယာများတန်ဖိုးနှင့် တရုတ်ယွမ်ငွေတန်ဖိုးများမှာ ကျဆင်းခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အမေရိကန်အစိုးရ၏ စာရင်းအချက်အလက်များအရ အမေရိကန်စတော့ဈေးကွက်တွင် စာရင်းသွင်းထားသည့် တရုတ်ကုမ္ပဏီ (၁၅၆) ခုရှိကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် စပ်ဆက်နေသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်မှုများ ပြုလုပ်သည့်သတင်းကြောင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၇) ရက် (သောကြာနေ့) မှစတင်၍လက်ရှိအချိန်ထိ ကာလအတွင်း အလီဘာဘာကုမ္ပဏီ၏ စတော့ရှယ်ယာများတန်ဖိုးမှာ ၅% ကျော်နှင့် အခြားတရုတ်ကုမ္ပဏီများ၏ စတော့ရှယ်ယာတန်ဖိုးများမှာ အနည်းဆုံး ၁.၂ % မှ အများဆုံး ၆% အထိ ကျဆင်းခဲ့ကြောင်း၊ တရုတ်စတော့ရှယ်ယာများ တန်ဖိုးကျဆင်းသည့်နည်းတူ တရုတ်ယွမ်ငွေတန်ဖိုးမှာလည်း ၀.၁၄% ကျဆင်းပြီး ရက်သတ္တပတ် (၃) ပတ်အတွင်း အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည့် အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာလျှင် တရုတ်ယွမ်ငွေ ၇.၁၅ ယွမ်လှဲလယ်မှုနှုန်းသို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း www.cnbc.com အင်တာနက် website တွင် ဖော်ပြပါရှိပါသည်။
မလေးရှားအစိုးရသည် ပြည်ပသို့စားအုန်းဆီတင်ပို့မှုအပေါ် ပို့ကုန်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခဲ့ခြင်းနှင့် စားအုန်းဆီနှင့်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သော ပဲပိစပ်ဆီဈေးနှုန်းအား ပျော့နေခြင်းတို့ကြောင့် မလေးရှားစားအုန်းဆီဈေးနှုန်းမှာ ၁% နီးပါးကျဆင်းခဲ့
မလေးရှားအစိုးရသည် ပြည်ပသို့ စားအုန်းဆီတင်ပို့မှုအပေါ် ပို့ကုန်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခဲ့ခြင်းနှင့် စားအုန်းဆီနှင့်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သော ပဲပိစပ်ဆီဈေးနှုန်းအား ပျော့နေခြင်းတို့ကြောင့် မလေးရှားစားအုန်းဆီဈေးနှုန်းမှာ ၁% နီးပါးကျဆင်းခဲ့
မလေးရှားအစိုးရသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှစ၍ စားအုန်းဆီပို့ကုန်ခွန်အား ၀% ၌ သတ်မှတ်ထားခဲ့သည့်အပြင် လာမည့်အောက်တိုဘာလတွင်လည်း စားအုန်းဆီပို့ကုန်ခွန်အားပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲ ၀% ၌သာဆက်လက်ထားရှိသွားမည်ဟု ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ကြေညာခဲ့သည့်အတွက် မလေးရှားဈေးကွက်တွင် စားအုန်းဆီဈေးနှုန်းကျဆင်းလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ထို့ပြင် တရုတ်နိုင်ငံဒါလျန်းဈေးကွက်၌ စားအုန်းဆီနှင့်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သော ပဲပိစပ်ဆီဈေးနှုန်းကျဆင်းနေခြင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်အတွင်း ရေနံဈေးနှုန်းများကျဆင်းနေသည့်အတွက် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ဇီဝလောင်စာဆီအဖြစ် စားအုန်းဆီကို အသုံးပြုမည့်အစားရေနံကိုပြောင်းလဲသုံးစွဲနေခြင်းအစရှိသည့် အချက်များသည်လည်း စားအုန်ဆီဈေးနှုန်းကို ကျဆင်းစေသည့် အခြားအချက်များဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၇) ရက် (သောကြာနေ့) နံနက်ပိုင်းတွင် မလေးရှားစားအုန်းဆီဈေးကွက်၌ စားအုန်းဆီကြိုတင်ရောင်းဝယ်မှုဈေးနှုန်းမှာ ၀.၈% ကျဆင်းပြီးတစ်တန်လျှင် မလေးရှားရင်းဂစ်ငွေ ၂၁၅၁ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၁၄ ခန့်) သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ မလေးရှားစားအုန်းဆီဈေးနှုန်းသည် ယခုရက်သတ္တပတ်အတွင်း ၃.၃% ခန့် ကျဆင်းခဲ့ကြောင်း www.sg.news.yahoo.comအင်တာနက် website တွင် ဖော်ပြပါရှိပါသည်။
တရုတ်အစိုးရသည် ဘေကျင်းမြို့၌ ဒုတိယမြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကို ထပ်မံဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးနောက်ကမ္ဘာ့လေကြောင်းခရီးသွားဈေးကွက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ ယှဉ်ပြိုင်မှုပိုမိုပြင်းထန်လာဖွယ်ရှိ
တရုတ်အစိုးရသည် ဘေကျင်းမြို့၌ ဒုတိယမြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကို ထပ်မံဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးနောက် ကမ္ဘာ့လေကြောင်းခရီးသွားဈေးကွက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ ယှဉ်ပြိုင်မှု ပိုမိုပြင်းထန်လာဖွယ်ရှိ
တရုတ်အစိုးရသည် ဘေကျင်းမြို့၌ ဒုတိယမြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အဖြစ် တာ့ရှန်း (Daxing) လေဆိပ်သစ်ကြီးကို၂၀၁၉ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၅) ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်း၊ တာ့ရှန်းလေဆိပ်သည်ဧရိယာ (၁၈) စတုရန်းမိုင်ခန့်ကျယ်ဝန်းပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆၃) ဘီလီယံခန့် အကုန်အကျခံ တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ကာ လက်ရှိအချိန်၌ ကမ္ဘာပေါ်၌ အကြီးဆုံးလေဆိပ်အဖြစ် ရပ်တည်လျက်ရှိကြောင်း၊ တာ့ရှန်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သည် ယခုဖွင့်လှစ်သည့် ကနဉီးအဆင့်၌ တစ်နှစ်လျှင် ခရီးသွားဦးရေ (၄၅) သန်းခန့်ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပြီး၂၀၂၅ခုနှစ်နောက်ပိုင်း၌ တစ်နှစ်လှျင် ခရီးသွားဦးရေသန်း (၁၀၀) ခန့်အထိဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်တရုတ်အစိုးရက မျှော်မှန်းထားကြောင်း၊ လက်ရှိအချိန်၌ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ အတ္တလန်တာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သည် ကမ္ဘာပေါ်၌ ခရီးသွားများအဝင်အထွက်အများဆုံးလေဆိပ်အဖြစ် ရပ်တည်လျက်ရှိပြီး တစ်နှစ်လျှင် လေကြောင်းခရီးသွားဦးရေ (၁၀၇) သန်းခန့် ဝင်ထွက်သွားလာလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာအရ တာ့ရှန်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ဖွင့်လှစ်ပြီးနောက်တွင် ကမ္ဘာ့လေကြောင်းခရီးသွားဈေးကွက်၌ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့၏ ပြိုင်ဆိုင်မှုမှာ ပိုမိုပြင်းထန်လာဖွယ်ရှိကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံသည်လာမည့် (၅) နှစ်တာကာလအတွင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ကျော်လွန်၍ ကမ္ဘာပေါ်၌ လေကြောင်းခရီးသွားလာမှု အများဆုံးဈေးကွက်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၁၈ခုနှစ်အတွင်း ဘေကျင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ဝင်ထွက်သွားလာခဲ့သူခရီးသည်အရေအတွက်မှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၅.၄% မြင့်တက်ခဲ့ပြီး (၁၀၁) သန်းခန့်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၁၈ခုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာပေါ်၌ ခရီးသည်အဝင်အထွက်အများဆုံးအတ္တလန်တာလေဆိပ်သို့ ဝင်ထွက်ခဲ့သူ ခရီးသည်အရေအတွက်မှာ ၂၀၁၇ခုနှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၃.၃% သာမြင့်တက်ခဲ့ပြီး (၁၀၇) သန်းခန့်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် လက်ရှိအချိန်တွင် အဆိုပါလေဆိပ်နှစ်ခုသို့ ဝင်ထွက်သည့်ခရီးသွားအရေအတွက်မှာ အနည်းငယ်ကွာဟမှု ရှိနေသေးသော်လည်း တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ခရီးသွားဝင်ရောက်မှုနှုန်း တိုးတက်လာသည့်ပမာဏတွင်မူ ဘေကျင်းလေဆိပ်ကပိုမိုများပြားလာသည်ကို တွေ့ရှိရသည်ဟု ဖော်ပြထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
တရုတ်အစိုးရသည် တာ့ရှန်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အား ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းမှာ လေကြောင်းခရီးသွားအများအပြားကို ပိုမိုလက်ခံနိုင်ရန်နှင့် ဘေကျင်းလေဆိပ်တွင် ခရီးသည်ဝင်ရောက်မှုများပြားလွန်းသည့်အတွက် တစ်ခါတစ်ရံဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုကြန့်ကြာမှုကိစ္စများကိုလျှော့ချနိုင်ရန်တို့ဖြစ်ကြောင်း၊၂၀၁၈ခုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာပေါ်၌ လေကြောင်းခရီးသွားအများဆုံးလေဆိပ် (၅) ခုမှာအတ္တလန်တာလေဆိပ် (ခရီးသည်၁၀၇သန်း) ၊ ဘေကျင်းလေဆိပ် (ခရီးသည်၁၀၁သန်း)၊ ဒူဘိုင်းလေဆိပ် (ခရီးသည်၉၀သန်း) ၊လော့စ်အိန်ဂျလိစ်လေဆိပ် (ခရီးသည်၈၈သန်း)၊ တိုကျိုလေဆိပ် (ခရီးသည်၈၇သန်း) တို့ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်များမှာ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းလေဆိပ်များအဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာသည့်နည်းတူ တရုတ်လေကြောင်းလိုင်းများဖြစ်သည့် China Southern နှင့်Air China လေကြောင်းလိုင်းများသည် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းလေကြောင်းလိုင်း (၁၀) ခုစာရင်းတွင်ပါဝင်လာခဲ့ကြောင်း၊ အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်းများဖြစ်သော United၊ Delta နှင့်American လေကြောင်းလိုင်းများမှာ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းလေကြောင်းလိုင်း (၃) ခုအဖြစ်လက်ရှိအချိန်အထိ ဆက်လက်ရပ်တည်လျက်ရှိသော်လည်း တရုတ်လေကြောင်းလိုင်းများ၏ တိုးတက်မှုနှုန်းမှာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုမိုမြန်ဆန်တိုးတက်လာသောကြောင့် လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း တရုတ်လေကြောင်းလိုင်းများမှာ အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်းများနှင့်အပြိုင်ဖြစ်လာဖွယ်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
လက်ရှိအချိန်၌ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့က သတ်မှတ်ထားသောကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းလေကြောင်းလိုင်း (၁၀) ခုမှာUnited ၊Delta ၊American (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု) ၊Lufthansa (ဂျာမနီ)၊ IAG (ဗြိတိန်)၊ AF-KLM (ပြင်သစ်) ၊Emirate(အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု) ၊China Southern (တရုတ်) ၊Southwest (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု) နှင့်Air China (တရုတ်) တို့ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပါရှိပါသည်။
စက်တင်ဘာ 26, 2019
အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်အ‌ပေါ် အောက်လွှတ်တော်ရှိ ဒီမိုကရက်ပါတီလွှတ်တော်အမတ်များက အရေးယူနိုင်ရေးအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်မည့်သတင်းကြောင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုး ကျဆင်းသွားခဲ့
အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်အ‌ပေါ် အောက်လွှတ်တော်ရှိဒီမိုကရက်ပါတီလွှတ်တော်အမတ်များက အရေးယူနိုင်ရေးအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်မည့်သတင်းကြောင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုး ကျဆင်းသွားခဲ့
အမေရိကန် သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင် ထပ်မံအနိုင်ရရှိစေရန်အတွက် ဒီမိုကရက်ပါတီသမ္မတလောင်းအဖြစ် ရေပန်းစားနေသူဂျိုဘီဒင်အားမသမာသောနည်းလမ်းဖြင့် အနိုင်ယူရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်ဖြင့် အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ရှိ ဒီမိုကရက်ပါတီလွှတ်တော်အမတ်များက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ရန်စီစဉ်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်သည် ဂျိုဘီဒင်၏သားဖြစ်သူ ဟန်တာဘီဒင်အားယူကရိန်းရေနံကုမ္ပဏီတစ်ခုက အလွန်မြင့်မားသောလစာဖြင့် အလုပ်ခန့်အပ်ခဲ့သည့်ကိစ္စတွင် ဂျိုဘီဒင်နှင့် ယူကရိန်းရေနံကုမ္ပဏီတို့အကြား အကျိုးစီးပွားဆက်နွယ်နေသော အဂတိလိုက်စားမှုများရှိနိုင်သည် ဟူသောစွပ်စွဲချက်ဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပေးရန်အတွက် ယူကရိန်းသမ္မတဇာလင်စကီးထံ ဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း၊ တောင်းဆိုမှုကိုလိုက်လျောခြင်းမရှိပါက ယူကရိန်းသို့ အကူအညီပေးအပ်မည့် အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း (၄၀၀) ကိုဆိုင်းငံ့ထားမည့်အကြောင်းကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကယူကရိန်းသမ္မတအား တယ်လီဖုန်းမှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ပြောကြားခဲ့သည်ဟု သိရှိရကြောင်း၊ အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဒီမိုကရက်ပါတီလွှတ်တော်အမတ် နန်စီပီလိုဆီသည် သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်၏ လုပ်ရပ်အား အခြေခံဥပဒေကို ချိုးဖောက်သောဆိုးဝါးသည့်လုပ်ရပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးသမ္မတအနေဖြင့် ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရှိရမည်ဟု ပြောကြားကာ သမ္မတအပေါ် တရားဝင်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၄) ရက် (အင်္ဂါနေ့) တွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း၊ အမေရိကန်သမ္မတအပေါ်အောက်လွှတ်တော်က စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်မည့် သတင်းထွက်ပေါ်ပြီးနောက်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးအခြေအနေအပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကြောင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးမှာ ကျဆင်းသွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၅) ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) နံနက်ပိုင်းတွင် ကမ္ဘာ့ငွေကြေးဈေးကွက် အတွင်း၌ အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးမှာ ၀.၂၈% ကျဆင်းခဲ့ပြီး အညွှန်းကိန်းအမှတ် (၉၈.၃၄) သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးနှုန်းမှာမူ ၀.၅၇% မြင့်တက်ပြီးတစ်အောင်စလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၅၃၂.၂၀) သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းwww.reuters.com အင်တာနက် website တွင် ဖော်ပြပါရှိပါသည်။
စက်တင်ဘာ 25, 2019
ထိုင်းနိုင်ငံ၌ အတုအစစ်ခွဲခြားရန် ခက်ခဲသော ရွှေချောင်းအတု (ClonedGold) များ ဈေးကွက်အတွင်းပျံ့နှံ့နေသဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံကျောက်မျက်ရတနာများအသင်းကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့
ထိုင်းနိုင်ငံ၌ အတုအစစ်ခွဲခြားရန် ခက်ခဲသော ရွှေချောင်းအတု (ClonedGold) များဈေးကွက်အတွင်းပျံ့နှံ့နေသဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံကျောက်မျက်ရတနာများအသင်းက သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့
ထိုင်းနိုင်ငံ၌ အတုအစစ်ခွဲခြားရန်ခက်ခဲသော ရွှေချောင်းအတု (ClonedGold) များဈေးကွက်အတွင်း ပျံ့နှံ့နေသဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံကျောက်မျက်နှင့်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါ ရွှေချောင်းများ၌ အပေါ်ယံကိုသာ ရွှေဖြစ်ပြုလုပ်ထားပြီးအတွင်းပိုင်း၌ ရွှေအစားအခြားသတ္တုများကိုထည့်သွင်းကာ ရာခိုင်နှုန်းပြည့် ရွှေသားစင်စစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ရွှေချောင်း၊ ရွှေတုံးများအသွင်ဖြင့် လိမ်လည်ရောင်းချနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရှိရကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိဈေးကွက်၌ ယင်းရွှေထည်ပစ္စည်းများကို Fake Gold ဟူသည့် အသုံးအနှုန်းအစားCloned Gold ဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲလျက်ရှိကြောင်း၊ Cloned Goldမှာ လက်ရှိစစ်ဆေးနေသည့် ရွှေအတုအစစ်ခွဲခြားသည့် စက်များဖြင့် စစ်ဆေးရာ၌ပင် အတုအစစ်ခွဲခြားနိုင်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်ဟုသိရှိရပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ကျောက်မျက်နှင့် ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (GIT) ၏ဒါရိုက်တာဒူအန်ကာမိုဂျီရန်ဘတ်က ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၃) ရက် (တနင်္လာနေ့) တွင် ပြောကြားရာ၌ ယခုအခါ GIT ထံသို့ ရွှေအတုအစစ်ခွဲခြားပေးရန်အတွက် မေတ္တာရပ်ခံပေးပို့လာသည့် ရွှေချောင်း၊ ရွှေတုံးများ အများအပြားရောက်ရှိနေကြောင်း၊ ကနဦးစစ်ဆေးချက်များအရ အဆိုပါပစ္စည်းများ၏ မျက်နှာပြင်ကို ရွှေအစစ်ဖြင့်သွန်းလောင်းထားသော်လည်း အတွင်းပိုင်းတွင်မူ အခြားသတ္တုများထည့်သွင်းထားသောကြောင့် ရွှေ အတု/အစစ် ခွဲခြားစစ်ဆေးသည့် စက်ပစ္စည်းများအနေဖြင့် အတွင်းပိုင်းအထိ တိကျစွာမခွဲခြားနိုင်ကြောင်း၊ ဈေးကွက်အတွင်း အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာ၌ မူရာခိုင်နှုန်းပြည့် ရွှေသားစင်စစ်ဖြစ်ပြုလုပ်ထားသေ ာရွှေတုံး၊ ရွှေချောင်းများသဖွယ် လိမ်လည်၍ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း၊ သာမန်အားဖြင့် အလွယ်တကူမသိရှိနိုင်ဘဲ ချိုးဖဲ့စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်မှသာ ရွှေချောင်းအတုအများစုတွင် အတွင်းပိုင်း၌ ရွှေအစားအဖြိုက်နက်သတ္တုအများအပြားကို ထည့်သွင်းထားပြီး အချို့သောရွှေချောင်းအတုများတွင်မူ အတွင်းပိုင်း၌ ကြေးသို့မဟုတ် ခဲသတ္တုတစ်မျိုးမျိုးကို ထည့်သွင်းထားကာ ယင်းသတ္တုများ၏အပေါ်မှ ရွှေအစစ်ကိုဟန်ပြပုံလောင်းထားသည်ကိုတွေ့ရှိရကြောင်း၊ အလေးချိန်ဖြင့် တိုင်းတာစစ်ဆေးရာတွင်လည်းအဆိုပါ ရွှေချောင်းအတုများ၏အလေးချိန်မှာ ရွှေချောင်းအစစ်၏ အလေးချိန်နှင့် တထပ်တည်းတူညီလျက်ရှိသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
GIT ၏ ဒါရိုက်တာဒူအန်ကာမိုဂျီရန်ဘတ်က ဆက်လက်ပြောကြားရာ၌ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ချမ်းသာကြွယ်ဝသူများသည် ရွှေစင်ရွှေသားရာခိုင်နှုန်းပြည့်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များကိုဝယ်ယူ၍ နေအိမ်များတွင် ထားရှိပူဇော်လေ့ရှိရာ ယခုအခါ ရွှေအတုများရောနှောထားသည့် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များကို လိမ်လည်ရောင်းချမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရကြောင်း၊ ယခုအခါ GIT ၏ ဓါတ်ခွဲခန်း၌ Ultrasonic wave များကိုအသုံးပြု၍ စမ်းသပ်သောနည်းများဖြင့် သံသယရှိသောရွှေတုံး၊ ရွှေချောင်းများအားစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း www.bangkokpost.comအင်တာနက် website တွင် ဖော်ပြပါရှိပါသည်။
အီရန်နှင့် စစ်ရေးတင်းမာမှုဖြစ်ပေါ်နေချိန်တွင် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသသို့ အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များ ထပ်မံရောက်ရှိလာခြင်းနှင့် တက္ကဆက်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ အီမယ်လ်ဒါမုန်တိုင်း ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် ရေနံဈေးနှုန်းများ ၁% ခန့် မြင့်တက်ခဲ့
အီရန်နှင့် စစ်ရေးတင်းမာမှုဖြစ်ပေါ်နေချိန်တွင် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသသို့ အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များထပ်မံရောက်ရှိလာခြင်းနှင့် တက္ကဆက်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ အီမယ်လ်ဒါမုန်တိုင်း ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် ရေနံဈေးနှုန်းများ ၁% ခန့် မြင့်တက်ခဲ့
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် အီရန်နိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံရေးတင်းမာနေသည့် အချိန်တွင် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသသို့ အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များအား ထပ်မံစေလွှတ်၍ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ၏လုံခြုံရေးကို အကာအကွယ်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မိုက်ပွန်ပီယိုက ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၂) ရက်(တနင်္ဂနွေနေ့) တွင် ပြောကြားရာ၌ အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များသည် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအား အခြားနိုင်ငံများမှ တိုက်ခိုက်လာမည့်အရေးကို တားဆီးကာကွယ်ပေးရန်အတွက်သာဖြစ်ပြီး အီရန်နိုင်ငံနှင့်စစ်မက်ဖြစ်ပွားရန် ရည်ရွယ်ချက်မရှိဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသသို့ အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များ ထပ်မံဝင်ရောက်လာသည့်အတွက် ဒေသတွင်းမတည်ငြိမ်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်ကာ ရေနံထုတ်လုပ်မှုနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ထိခိုက်လိမ့်မည်ဟူသော ခန့်မှန်းချက်များ ပေါ်ထွက်နေသောကြောင့် ရေနံဈေးနှုန်းများမှာ ၁% ခန့် မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ထို့ပြင် ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တက္ကဆက်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်သွားသည့် အီမယ်လ်ဒါဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကြောင့် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုများ၊ ရေလွှမ်းမိုးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်အတွက် တက္ကဆက်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ရေနံထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းနေခြင်းသည်လည်း ရေနံဈေးနှုန်းများကို မြင့်တက်စေသည့် အခြားအချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း၊ တက္ကဆက်ပြည်နယ်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ရေနံအများဆုံးထုတ်လုပ်နေသော ပြည်နယ်ဖြစ်ပြီး တစ်နေ့လျှင်စည်ပေါင်း (၃) သန်းကျော်ခန့် ထုတ်လုပ်လျက်ရှိကြောင်း၊ ယခုအခါ အီမယ်လ်ဒါမုန်တိုင်း၏ အရှိန်ကြောင့် တက္ကဆက်ပြည်နယ်အတွင်းရှိရေနံချက်စက်ရုံအချို့မှာ လုပ်ငန်းများရပ်ဆိုင်းထားရသည့်အတွက် တစ်နေ့လျှင် စည်ပေါင်း (၃၆၉,၀၀၀) နီးပါးခန့် ထုတ်လုပ်မှု ကျဆင်းသွားသည်ဟု သိရှိရပါသည်။
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၃) ရက် (တနင်္လာနေ့) နံနက်ပိုင်းတွင် နယူးယောက်ဈေးကွက်၌ WTI ရေနံစိမ်းကြိုတင်ရောင်းဝယ်မှုဈေးနှုန်းမှာ ၀.၉% မြင့်တက်ခဲ့ပြီး တစ်စည်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅၈.၇၈) သို့ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ လန်ဒန်ဈေးကွက်၌ ဘရန့်ရေနံစိမ်းကြိုတင်ရောင်းဝယ်မှုဈေးနှုန်းမှာ ၀.၉% မြင့်တက်ခဲ့ပြီး တစ်စည်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆၄.၉၇) သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း www.reuters.com အင်တာနက် website တွင် ဖော်ပြပါရှိပါသည်။
Facebook သည် Libra ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးကိုထုတ်ဝေရာ၌ အမေရိကန်ဒေါ်လာကို အဓိကအခြေပြုချိတ်ဆက်၍ ထုတ်ဝေသွားမည်ဟုသိရှိရ
Facebook သည် Libra ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးကိုထုတ်ဝေရာ၌ အမေရိကန်ဒေါ်လာကို အဓိကအခြေပြုချိတ်ဆက်၍ ထုတ်ဝေသွားမည်ဟု သိရှိရ
Facebook သည် Libra ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးကို ထုတ်ဝေရာ၌ Libra ငွေကြေး၏တန်ဖိုးခိုင်မာမှုရှိစေရန်အတွက် အရန်အာမခံအဖြစ်ထားရှိမည့် အရာများတွင် နိုင်ငံတကာသုံးငွေကြေးများနှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးရှိအစိုးရများမှ ထုတ်ဝေထားသော ကာလတိုငွေတိုက်စာချုပ်စာတမ်းများ ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး အာမခံထားရှိမည့်ငွေကြေးများ၏ ၅၀% မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာများဖြစ်သည်ဟု သိရှိရကြောင်းFacebook သည် Libra ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးကို ထုတ်ဝေရာ၌ အမေရိကန်ဒေါ်လာကို အဓိကအခြေပြုချိတ်ဆက်၍ ထုတ်ဝေသွားမည်ဟု သိရှိရပါသည်။
Facebook မှ ထုတ်ဝေမည့် Libra ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိဗဟိုဘဏ်များ၊ ဥပဒေပြုလွှတ်တော်အမတ်များနှင့် ငွေကြေးမူဝါဒရေးဆွဲသူများက စိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြစ်ပေါ်နေချိန်တွင် ဂျာမနီလွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဖာဘီယိုဒီမက်ဆီသည် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် အခြေပြုဖွင့်လှစ်ထားသည့် Libra Association ထံသို့ ငွေကြေးထုတ်ဝေမည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ စာရေးသားမေးမြန်းခဲ့ရာတွင် Libra Association တာဝန်ရှိသူများက Libraငွေကြေးကို အာမခံပေးနိုင်မည့် အရန်ငွေထူထောင်ထားရှိရန်ကိစ္စကို စာဖြင့်ယခုကဲ့သို့ အကြောင်းပြန်ကြားခဲ့သည်ဟု သိရှိရကြောင်း၊ Libra Association ကိုFacebookနှင့် မိတ်ဖက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများက တည်ထောင်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
Libra Association ၏ အကြောင်းပြန်ကြားစာတွင် Libra ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးနှင့် အဓိကထားအခြေပြုချိတ်ဆက်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် ငွေကြေးများတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ယူရို၊ ဂျပန်ယန်း၊ စတာလင်ပေါင် နှင့် စင်ကာပူဒေါ်လာတို့ ပါဝင်ပြီး Libraငွေကြေးအသုံးပြုသူများယုံကြည် စိတ်ချစွာသုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက် Facebook က အာမခံငွေကြေးအဖြစ်ထားရှိမည့် နိုင်ငံတကာအရန် ငွေကြေးများတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀%၊ ယူရိုငွေ ၁၈%၊ ဂျပန်ယန်းငွေ ၁၄%၊ ဗြိိတိသျှစတာလင်ပေါင် ၁၁% နှင့် စင်ကာပူဒေါ်လာ ၇% တို့ ပါဝင်သည်ဟုဖော်ပြထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။
Libraသည် အာမခံငွေကြေးအဖြစ်ထားရှိမည့် နိုင်ငံတကာအရန်ငွေကြေးများတွင် တရုတ် ယွမ်ငွေကို ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိသကဲ့သို့ Libra က ရည်ညွှန်းငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှုန်းသတ်မှတ် ကာအခြေပြုချိတ်ဆက်မည့် ငွေကြေးများတွင်လည်း တရုတ်ယွမ်ငွေမပါဝင်ကြောင်း၊ လက်ရှိအချိန်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့အကြား ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေသည့်အပြင် အမေရိကန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူအများစုသည် တရုတ်အစိုးရ၏ ယွမ်ငွေကြေးတန်ဖိုးဆိုင်ရာမူဝါဒအပေါ် အဆိုးမြင်သည့် သဘောထားများရှိနေသည့်အတွက် Facebookတာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် Libraဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးထုတ်ဝေသည့်ကိစ္စတွင် အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူများနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများ ထပ်မံမဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် Libraနှင့် အဓိကချိတ်ဆက်မည့် အာမခံငွေကြေးများစာရင်းတွင် ယွမ်ငွေကိုတမင်ချန်လှပ်ထားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းရကြောင်း www.reuters.comအင်တာနက် website တွင် ဖော်ပြပါရှိပါသည်။
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အီရန်နိုင်ငံတို့အပေါ် အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်၏ ပြင်းထန်သည့် တုံ့ပြန်မှုများကြောင့် ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးနှုန်းမှာ တစ်အောင်စလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၅၀၀) အထက်သို့ ပြန်လည် မြင့်တက်ခဲ့
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အီရန်နိုင်ငံတို့အပေါ် အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်၏ ပြင်းထန်သည့် တုံ့ပြန်မှုများကြောင့် ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးနှုန်းမှာ တစ်အောင်စလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၅၀၀) အထက်သို့ ပြန်လည်မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်သည် ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၀) ရက် (သောကြာနေ့) တွင် ပြောကြားရာ၌ တရုတ်အစိုးရအနေဖြင့် အမေရိကန် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူပေးမည့် ကိစ္စတစ်ခုတည်းကိုသာ ကတိမပေးဘဲကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲတစ်ခုလုံး ပြီးဆုံးစေရန်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ လိုက်လျောပေးနိုင်သည့် အရာအားလုံးကို လိုက်လျောပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသည့် အနေအထားအရတရုတ်နိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့အကြား ပြီးပြည့်စုံသော ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီမှုရရှိရေးကိစ္စမှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အမေရိကန်သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲကာလသို့ ရောက်ရှိသည့်တိုင်အောင် အကောင်အထည် ပေါ်ပေါက်လာနိုင်မည်မဟုတ်ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်၏ ပြောကြားချက်ထွက်ပေါ်ပြီးနောက်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ရောက်ရှိနေသော တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် မွန်တာနားပြည်နယ်နှင့် နီဘရက်စ်ကားပြည်နယ်များသို့ သွားရောက်၍ လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရေးကို ညှိနှိုင်းမည့် ၎င်းတို့၏ခရီးစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းကာ တရုတ်နိုင်ငံသို့ပြန်လည်ထွက်ခွာရန် ပြင်ဆင်လျက်ရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အမေရိကန် – တရုတ်ကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးမှုများမှာ သေချာရေရာမှုမရှိသည့် အနေအထားသို့ ဆိုက်ရောက်သွားခဲ့ခြင်းနှင့်အတူ ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေးအပေါ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက စိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြစ်ပေါ်နေသည့်အတွက် ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးနှုန်းမှာ တစ်အောင်စလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၅၀၀) အထက်သို့ ပြန်လည်မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ထို့ပြင် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရှိရေနံတွင်းများ တိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အီရန် နိုင်ငံဗဟိုဘဏ်အပေါ် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများပြုလုပ်ရန် အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအား အမိန့်ပေးညွှန်ကြားခဲ့သည့်အတွက် အမေရိကန် နှင့်အီရန်နိုင်ငံတို့အကြား တင်းမာမှုများမှတစ်ဆင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ၏ ပထဝီနိုင်ငံရေးအခြေအနေပိုမိုဆိုးရွားလာဖွယ်ရှိခြင်းသည်လည်း ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးနှုန်းကို မြင့်တက်စေသည့်အခြားအချက် တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၁) ရက်(စနေနေ့)နံနက်ပိုင်းတွင် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်အတွင်း ရွှေ လက်ငင်းရောင်းဝယ်မှုဈေးနှုန်းမှာ ၀.၆% မြင့်တက်ခဲ့ပြီးတစ်အောင်စလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၅၀၈.၆၃) သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးနှုန်းသည် ယခုရက်သတ္တပတ်အတွင်း ၁.၅% ခန့် မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်းwww.marketwatch.comအင်တာနက် website တွင်ဖော်ပြပါရှိပါသည်။
အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ် အစည်းအဝေးအပြီးကျင်းပခဲ့သည့် ဂျပန်ဗဟိုဘဏ်အစည်းအဝေးတွင် ဘဏ်တိုးနှုန်းကိုလက်ရှိအနေအထားအတိုင်း ဆက်လက်ထားရှိရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့
လက်ရှိအချိန်၌ ဥရောပသမဂ္ဂဗဟိုဘဏ်နှင့် အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်အပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုရှိ ဗဟိုဘဏ်များသည် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအခြေအနေအပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် ၎င်းတို့နိုင်ငံအသီးသီး၏ စီးပွားရေးပြန်လည်နှိုးဆွနိုင်ရန်တို့အတွက် ဘဏ်တိုးနှုန်းများကိုအသီးသီးလျှော့ချလျက်ရှိသော်လည်း ဂျပန်ဗဟိုဘဏ်မှာမူ ဘဏ်တိုးနှုန်းကို ထပ်မံလျှော့ချခြင်းမပြုရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၉) ရက် (ကြာသပတေးနေ့) တွင် ပြီးဆုံးခဲ့သည့် ဂျပန်ဗဟိုဘဏ် အစည်းအဝေး၌ ကာလတိုအပ်နှံငွေများအတွက် အတိုးနှုန်းကို (-) ၀.၁% နှင့် ကာလရှည်အပ်နှံငွေများအတွက် အတိုးနှုန်းကို ၀% ၌သာအသီးသီးဆက်လက်ထားရှိရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း၊ အစည်းအဝေးမတိုင်မီ အချိန်များ၌ ဂျပန်ဗဟိုဘဏ်အနေဖြင့် ကာလတိုအပ်နှံငွေအတွက် အတိုးနှုန်းကို(-)၀.၄% သို့ လျှော့ချလိမ့်မည်ဟူသော သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း ဂျပန်ဗဟိုဘဏ်အနေဖြင့် အမေရိကန် ဗဟိုဘဏ်အစည်းအဝေးအပြီးဖြစ်ပေါ်လာသော ကမ္ဘာ့ငွေကြေးဈေးကွက်အခြေအနေကို သုံးသပ်ကာဘဏ်တိုးနှုန်းကို လက်ရှိအနေအထားအတိုင်း ဆက်လက်ထားရှိရန်နှင့် ငွေကြေးဈေးကွက်အတွင်းသို့ ဂျပန်ယန်းငွေအများအပြားဖြည့်တင်း၍ ဂျပန်ငွေတိုက်စာချုပ်များ ပြန်လည်ဝယ်ယူမည့် အစီအစဉ်များကိုလည်း စွန့်လွှတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ဂျပန်ယန်းငွေတန်ဖိုးသည် ဂျပန်ဗဟိုဘဏ်အစည်းအဝေးမတိုင်မီကာလများတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရာ၌ အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာလျှင် ဂျပန်ယန်းငွေ (၁၀၈.၀၈) ယန်းလဲလှယ်မှုနှုန်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာမှ ဂျပန်ဗဟိုဘဏ်အစည်းအဝေးအပြီးတွင် ၀.၁၄% မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၀) ရက် (သောကြာနေ့) နံနက်ပိုင်းတွင် အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာလျှင် ဂျပန်ယန်းငွေ(၁၀၇.၈၇)ယန်းလဲလှယ်မှုနှုန်းသို့မြင့်တက်သွားခဲ့ကြောင်းwww.xinhuanet. comအင်တာနက် website တွင်ဖော်ပြပါရှိပါသည်။